အနစ်နာခံရတာတွေ စတေးရတာတွေ များလွန်းတဲ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဥ် တကယ်အောင်မြင်ရဲ့လား? - Zet Star
အနစ်နာခံရတာတွေ စတေးရတာတွေ များလွန်းတဲ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဥ် တကယ်အောင်မြင်ရဲ့လား?
ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် Data collection (အချက်အလက်စုဆောင်းမှု)၊ Planning ( အချက်အလက်ပေါ် မူတည်ပြီး စီမံချက် ရေးဆွဲဖို့)၊ Implementation ( စီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့)၊ Evaluation ( စီမံချက် အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူး၊ ဘာတွေပြုပြင်မယ်ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ဖို့ )
ဒီလိုတွေ containment နဲ့ ကိုင်တွယ်လိုက်လို့ ထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်လာသလားဆိုတော့ လူနာက ထောင်နဲ့ချီနေတုန်းပါပဲ။ တကယ်သာ containment ၊ stay at home အောင်မြင်ခဲ့ရင် ဒီအချိန်မှာ ပိုးတွေ့သူဦးရေ ကျသင့်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မကျပါဘူး။ မကျတဲ့ အပြင် နယ်တွေမှာ ပိုတောင်တက်လာပါတယ်။ ဥပမာ မန္တလေးဆို ဆေးရုံပြည့်လို့ လူနာကို ပြင်ဦးလွင်သွားထားရတဲ့ အခြေအနေမျိုးရောက်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလဲ fever clinic တွေက အိမ်ပြန်လွှတ်နေရတဲ့ အသံတွေ အမြဲသိနေ ကြားနေရတာပါပဲ။
အခုဆို ရန်ကုန်မှာ ကားတွေပြန်ကျပ်နေပြီ။ လူတွေ အများအပြား ပြန်ထွက်နေကြပြီ။ ပိုးတွေ့သူ နည်းသွားလို့ ပြန်ထွက်လာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့ ပိုးတွေ့သူ တစ်ထောင်ဆိုတာကို ရိုးသွားလို့ရယ်၊ စားဝတ်နေရေးကြောင့်ရယ်၊ new normal ကို လက်ခံပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ လက်ခံလာကြလို့ပါပဲ။
ဒီအတောအတွင်း ဒီလိုပဲ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်ပိတ်ကြမလား။ ကျောင်းတွေ ဆက်ပိတ်ထားမလား။ ဆေးရုံတွေကရော ကိုဗစ်မဟုတ်သူတွေကို အရင်လို မကုကြတော့ဘူးလား။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရော အိမ်မပြန်ကျတော့ဘူးလား။
ဒါမှမဟုတ် စည်းကမ်းတကျ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် mask သေချာတပ်တာကို တင်းကြပ်ပြီး social distancing နဲ့ အညီ အားလုံးပြန်ဖွင့်ကြပြီး စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး new normal ကို သွားမလား။
ဆေးရုံတွေလဲ အမှန်တကယ် ကုသမှုလိုတဲ့ ၂၀% သောလူနာကိုပဲ ဆေးရုံတင်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ မပြင်းထန်တဲ့သူတွေကို အိမ်မှာပဲ နေစေမလား။ ဒါဆို ဆေးရုံတွေမှာ ကုတင်အပိုတွေ အများကြီးထွက်လာမယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ကျသွားမယ်။ ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ လူနာတွေကို အရင်လို ပြန်ကုလာနိုင်မယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးပြောလိုတာက ဒီ post ဟာ ပေါ်လစီကိုပြောတာပါ။ ကုသမှုပေးရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့က အထူးလေးစားစရာပါ။ အထူးချီးကျူးလေးစား ဂုဏ်ယူလျှက်ပါ။
← တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့မှာ တံခါးပိတ်ချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ မြန်မာမလေး (၃၉) ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့
ကူးစက်မှုနှုန်း ပြန်လည် မြင့်တက်လာတဲ့ ဂျာမနီမှာ လော့ဒေါင်း ကြေညာလိုက်ပြီ →